တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 25, 2015 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 25, 2015 Douglas Karr
အရောင်တွေက ၀ ယ်မှုအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုကောင်းမွန်တဲ့ infographics အချို့ကိုပြထားပါတယ်။ Kissmetrics မှသတ်မှတ်ထားသောကျား၊ ငါကွဲပြားခြားနားမှုမှာအံ့အားသင့်ခဲ့ ... ထိုလိမ္မော်ရောင်စျေးပေါအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်! အခြားအရောင်များနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များသည်အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါအကြိုက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်သည်လူငယ်များ၏ခံစားချက်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ နွေးထွေးမှု၊ အထီးနေစဉ်, တောက်ပသောအရောင်များကို ဦး တည်ဆွဲငင်အားလေ့
စမ်းသပ်ခြင်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသောအမြင်များ၊ ကလစ်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ထိပ်တန်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Landing စာမျက်နှာများ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အီးမေးလ်များအတွက်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းဗျူဟာကိုသင်၏စျေးကွက်ဇယားတွင်ဖော်ပြသင့်သည်။ သတင်းကောင်းလား နီးပါးဘာမှ optimization များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်! သတင်းဆိုးလား နီးပါးဘာမှ optimization များအတွက်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်တွေကသင့်ကိုစတင်ရန်ကောင်းသောနေရာအချို့ကိုပြသည်။ A / B သို့ခုန်